Ghostwriter Philosophy I Waxaan si dhakhso leh ugu qori doonaa waraaqahaaga shaqada
, 15: 52
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrada lagama maarmaanka u ah cilmiga falsafada
Shahaadada falsafaddu waa shahaado aad u culus oo aan arday kasta oo cusubi dhammayn. Philo macnaheedu waa jaceyl wax. Falsafadu waa jacaylka caqliga. Jacaylkani wuxuu soconayaa inta waxbarashadu socoto oo dhan. Inta lagu guda jiro daraasadda, qaababka iyo go'aaminta nolosha ayaa lagu sifeeyay ama, ugu horreyntii, isku day la sameeyay si loo helo faham aasaasi ah oo adduunka iyo jiritaanka aadanaha ah. Qoraallada ayaa loo qoraa oo looga doodaa ujeedkan. Qoraalladaani waa kuwo waqti badan qaadanaya oo culeys badan qaba. Kaliya nala soo xiriir oo noo soo dir email. Xor ayaad u tahay inaad codsato mid bilaash ah hadda dib u xusuusasho at. Waxaan dib kuugu soo wici doonnaa bilaash. Waxaad sidoo kale si toos ah u qaban kartaa shaqadaada amar. Na sii dukumintiyada lagama maarmaanka ah si aan ugu qaabeyn karno shaqadaada inay kugu habboon tahay.
Barashadaada falsafada waxa ku jira qaybo aad u baahan oo aad u adag in laga gudbo. Dabcan, maadooyinku way ku kala duwan yihiin jaamacad illaa jaamacad ama jaamacad ilaa jaamacad. Halkan waxaa ku yaal dulmar guud oo ku saabsan qaybaha inta badan u horseeda dhibaatooyinka ardayda falsafadda iyo xitaa inay ka baxaan:
Hordhaca taariikhda falsafada
Falsafad aragtiyeed iyo mid wax ku ool ah
Faahfaahintiisa falsafada weyn ee Immanuel Kant wuxuu ku sheegay "Sababta Sababta Saafi ah": 1. Maxaan ogaan karaa 2. Maxaan sameeyaa? 3. Maxaan rajayn karaa? 4. Waa maxay dadku?
Falsafaddu waxay keentaa su'aalo fara badan oo maadooyin kala duwan leh oo waxay raadisaa jawaabo. Falsafadda sharciga waxay qaadataa su'aalaha sharciga waxayna keenaysaa su'aasha aasaasiga ah ee sharciga iyo caddaaladda. Falsafadda siyaasadeed waxay su'aalo ka weydiisaa qaababka xukunka iyo raadinta jawaabaha xiriirka u dhexeeya muwaadiniinta iyo dawladda. Anshax cusub oo ku dhex jirta falsafadda ayaa ah falsafadda miyir-qabka, Halkan waxaa ka jira is-dhaafsiga fikradaha is-dhaafsiga ee fikradaha leh cilmu-nafsiga. Ardayda ku fadhiista kuraasta falsafada iyo borofisarrada waa inay isku dayaan inay jawaab u helaan su'aalahan inta ay waxbarashadooda socdaan. Qoraal-gacmeedku wuxuu caawiyaa ardayda. Waxaan ardayda ka caawinnaa waxbarashadooda shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraal iyo waliba Qoraalka PhD. Waxaan kugu taageereynaa maadadaada talo. Gaar ahaan, cilmi baarista suugaanta badanaa waa mid caajis badan mar walbana waqti badan qaadata.
Qoraalka ghost ee falsafada guud
Maadooyinkaagu waa u fududahay qorayaashayada. Waxaad ku guuleysatay buundooyin aad u wanaagsan maadooyinkaan. Sababtaas awgeed ayaa aad u siisaa caawimaadda dhinaca falsafada. Falsafadeena Ghostwriters waxay ku heleen darajooyin wanaagsan barashadaada waxayna kaa caawinayaan shaqadaada saynis. Wakaaladeena ghostwriter waxay u oggolaaneysaa qorayaasha cilmiga qoraalka inay abuuraan shaqo. Adiga ayaa mas'uul ka ah tayada iyo caqliga shaqada. Qorayaashayada ghostwriters-ka sayniska ayaa si fiican kaaga taageeri kara qoraalkaaga cilmiyeed. Waa inaad caawimaad heshaa oo aad dalbataa hadda. Haysashada qorista qoraalka tacliinta ayaa kaa caawin doonta. Adigu naftaada ha ahaato Shaqada guriga qor. Qoraayaasha waraaqaha tacliinta waxay ardayda ka caawiyaan sidii ay ugu guuleysan lahaayeen waxbarashadooda. Adiga ayaa abuuray Shaqada guriga, shahaadada bachelor, shahaadada Masterka, Qoraal, Tixraac ama Qoraalka PhD.
Falsafadda berrinkii hore
Qorayaashayagu waxay leeyihiin khibrad sannado badan ah oo ku saabsan aaggooda cilmi-baarista waxayna si guul leh u dhammaystireen shahaadada falsafadda. Waad tafatiri kartaa shaqadaada dadaal la'aan.
Falsafada duurka taariikhda
Haddii aad ku dhammaysatay shahaadada falsafadda adoo xoogga saaraya taariikhda, tusaale ahaan, waad ka shaqeyn kartaa xirfad-yaqaannimada ama kursiga. Waxa kale oo aad ku sii wadi kartaa adiga Maqalka sii wad ama ganacsi gal oo aqoontaada ku biiri. Celcelis dhibco fiican ayaa loogu baahan yahay tan.
Falsafada iyo rajada shaqada
Haddii aad ku dhammaysan kartid koorsada xilli-dugsiyeedka jadwalka ku jira muddada waxbarashada caadiga ah, waxaad leedahay fursado badan oo xirfadeed. Waad sii wadi kartaa baaritaanka maadadaada ama waxaad u shaqeyn kartaa lataliye ahaan. Waad xallin kartaa dhibaatooyinka fudud ee dhaqaalaha ama, tusaale ahaan, waxaad iskaa u heshay shirkad la-talin.
Hubinta tayada ee duurka falsafada